नगरकोटलाई बलात्कार गर्नेहरु होसियार… | Chautarikhabar
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक १३, २०७४	समय - १७:३५:५४
नगरकोट तिमी नरोउ, तिमी धर्तीको स्वर्ग हौ तर धर्तीको स्वर्गमा नर्क र नर्कराजहरुको नजर किन वढदैछ ? ……..
तिमीलाई नर्क र नर्कराजहरुले खुसुक्क पछाडिबाट चक्कु प्रहार गर्दा मेरो मन छिया छिया भएको छ र म भावविह्वल भएर रोएं कराएं तर कसैले सुनेनन् । कसै न कसैले त पक्कै सुनेकै हुनु पर्छ र भन्न थालेका छन् पछाडिवाट छुरा प्रहार गर्नेहरु वहादुरी हैनन तिनीहरु त कांतर र पापीहरु हुन । नर्कबाट कुदृष्टि लिएर स्वर्गमा प्रवेश गर्न खोज्नेहरुको बहि÷खातामा राम्रोसंग विवरणहरु रेकर्ड गरिएको हुनेछ र स्वर्ग प्रवेश गर्ने क्रममा तिनीहरुले स्वर्गको प्रथम द्धार पनि पार गर्न पाउने छैनन र छटपटिएर पुनः नर्कमा नै फर्केर नारकीय जीवन विताउन वाध्य हुने छन् ।
मेरी “नगरकोट” को सुन्दरताको स्वरुपलाई कुरुप बनाउन धेरै राजनितिक खेलहरु वारम्वार भईरहेका छन् । “नगरकोट” सुन्दरतावाट पापीहरुले क्षणिक विलाषिताको लागि प्रशस्त आय आर्जन गर्न खोजीरहेका छन् । अहिलेसम्म तिमीले आफनो सुन्दरता आभुषण तत्वहरुसंग साटेको र पैसामा वेचेको मलाई थाहा छैन तर आज तिमीले नचाहदा नचाहदै पनि जवरजस्ती तिम्रो सुन्दरतालाई मोलमोलाई गर्दै गाउ र शहरदेखि विश्व जगतमा वदनामी गर्न खोज्दैछन ती पापीहरुले । तर मेरी “नगरकोट” तिमीलाई सुन्दरता वेच्न बाध्य तुल्याउनेहरुको अन्त्य अवश्य हुनेछ र तिमीलाई वेच्न कदापी सक्ने छैनन् । तिम्रो वैंसको उन्माद र सुन्दरतलाई जवरजस्ती वलात्कार गर्न खोज्नेहरु होसियार …… , दिन गणना गर्दै वसे हुन्छ अव तिनीहरुको अन्त्यको समय टाढा देख्दिन म ।
आफनो जन्मस्थान “नगरकोट” को वलात्कार गर्ने कुपुत्रहरु वाहिरीय शक्तिहरुको आडमा नगरकोटलाई निर्वस्त्र पार्न खोजीरहेका छन् । खुलेयाम संसारको सामु आफनो नगरकोटको वलात्कार गरिरहंदा के हेरेर वसेका छन् यहांका वुद्धिजीवि भनाउदाहरु ? राजनिति दलहरु ? परिवर्तन खोज्ने र चाहनेहरुको ईच्छा यही हो त ? नगरकोटलाई निर्वस्त्र बनाई विश्व सामु ईज्जत लुटिरहदा र वलात्कार गरिरहंदा तमाम सन्ततीहरु मुक दर्शक भएर कहिलेसम्म वस्ने ? के हामी नगरकोट वासी भएर त्यसको विरोधमा लडन सकेनौ ? के शक्ति थियो ती राक्षसी जनावर र पिसाचहरुमा ? कुन जन्तुहरु भित्रियो चांगुनारायण नगरपालीकाको खोरमा ? चांगुनारायणको आफनै महत्व र महिमा छ तर सुडालसम्म क्षेत्र निर्धारण गरेर नगरकोटको ईज्जतमाथि वलात्कार गर्न खोज्ने राजनितिक दल, नेता, कार्यकर्ता के मुखले सामाजिक प्राणी भनेर प्रमाणित गर्न खोज्दैछनन् त ? नगरकोलाई जति माया दिनु पर्ने हो त्यो नगरकोट वासी वाहेक अरुले दिन सक्दैनन् । वाहिरीया जन्तुहरु त नगरकोटलाई ईज्जत वेच्न वाध्य तुल्याउने र नगरकोटलाई वलात्कार गर्ने मात्र हुन । शत्रु वा राक्षसहरुलाई नगरकोटमा भित्रयाउने नगरकोटकै कोखबाट जन्मिएका राक्षसहरु हुन् । ती राक्षसहरुले तिमीलाई चुस्न खोज्दैछ । तर तिमीले नआतिकन चुस्न देउ है ? तिनीहरुलाई । जुकाहरु अघाएपछि आफै झर्छन र जान्छन्, यसबाट तिमी “नगरकोट” को केही घाटा हुने छैन बरु तिमी महान र पवित्र हुनेछ ।
देश र जनता लुटन् राक्षसीहरुको विगविगी वढेको छ । हे नगरकोट …. तिमीले कस्तो खालको सन्तानहरुलाई जन्म दियौ ? जसले आज तिमीलाई नै वलात्कार गर्न नर्कराजहरुलाई अंगालो मार्न पुग्यौ । तिमीले कस्तो सन्तानलाई जन्म दियौ ? जसले आज तिम्रो सुन्दरतालाई पैसामा बेच्न वाध्य तुल्यायौ ? तिमीले कस्तो सन्तानलाई जन्म दियौ जस्ले तिमीलाई नै आज पछाडिबाट तरवार प्रहार गरयौ …… ।
तिमीले लगाएको गुन्यु, चोलो च्यातिएर के हेर्न खोज्दैछ ती राक्षसहरुले ? तिम्रो नांगो शरिर वेचेर के कमाउन खोजेका छन् ती वलात्कारीहरुले ? तिम्रो शरीर वेचेर कति कमाउदै रहेछन् ती राक्षसहरुले ?
तिमीले लगाएको गुन्यु चोलो कदापी च्यात्न दिन्न म । म तिनीहरुलाई टुक्रा टुक्रा पारेर छोडने छु । बरु म तिमीलाई नयां गुन्यु चोलो सिलाएर अनि पहिर्याएर अझ सुन्दर बनाउने अठोटमा छु । तिम्रो हजारौं सन्ततीहरुमा म मात्र सुपुत्र रहेछु । तिमीले विचार गर्दै जाउ कि हजारौ संख्यामा रहेको गुणस्तरहीन भन्दा एउटै मात्र गुणस्तरले तिमीलाई उज्यालो र सुनौले बनाउने छ ।
ईज्जत लुट्न तथा वलात्कार गर्नको लागि तोकिएको दर भाउ यसरी गरेका रहेछन् …
अन्य राष्ट्रका पर्यटकहरुबाट प्रति व्यक्ति रु. ३०० र भ्याट रु. ३९ गरि रु. ३३९
सार्क राष्ट्रका पर्यटकहरुवाट प्रति व्यक्ति रु. २०० र भ्याट रु. २६ गरि रु. २२६
चांगुनारायण नगरपालीकाको मेयरले के गर्न खोजिरहेको छ ? मैले बुझन सकिएन । उसले किन नगरकोटको वदनाम गर्दै छ ? आखिरी उ के चाहन्छ नगरकोटवाट ? उ नगरकोटलाई माया गर्न मेयर भएको हैन, उ त झापादेखि धाएर उपत्यकामा छिरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न आएको मात्र हो । उसलाई के थाहा नगरकोटको मन कति रोईरहेको छ भनेर ….. । उसले नगरकोटको वेज्जत किन गर्न खोज्दैछ ? आखिरी नगरकोटसंग किन यत्रो रिस पोख्दै छ त ?
भुकम्पले शिथिल बनाएको नगरकोटले जसोतसो संघर्ष गर्दै आफनो दैनिकीलाई उकास्न खोजीरहेको अवस्थामा फेरी नाका वन्दीको झल्को दिलाउने कार्य कुन दृष्टिकोणवाट सुरु गरियो त ? एकजना पर्यटकले नगरकोटमा आएर वास वस्दा राष्ट्रलाई कर तिरेकै हुन्छ र होटेल व्यवसायबाट केही मात्रामा भए पनि स्थानीय युवायुवतीले रोजगार पाईरहेको अवस्थामा पर्यटकहरुलाई तेलकोटबाट नै फर्काउन वाध्य तुल्याउने योजना कस्को लागि ल्याईएको हो ? एक जना पर्यटकले नगरकोटमा छिर्नको लागि मात्र तिरेको रकम रु. ३३९ र रु.२२६ ले उसले नगरकोटमा के प्राप्त गर्छ त ? हरेक पर्यटकले अग्रिम होटेल बुक गरेर आएका हुन्छन् । यो रकम तिरेवापत के सुविधा दिएको छ नगरपालीकाले ? व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक स्थानमा छैन, वाटो भत्कीएर ज्यान नै जोखिममा राखेर यात्रा गर्नु परेको छ, आवश्यकता अनुसार पर्यटकीय स्टाण्डर्डको पसलहरु छैनन्, आवश्यक ठाउमा सूचना केन्द्रहरु छैनन्, आदी आदी….
नगरकोटको पाउ तेलकोट भन्ज्याङ र जाल्पादेवीको आंगनमा किन दिनका दिन ताण्डव तृत्य देखाउदै छ त मेयरले ? दिनका दिन झगडा किन गराउन खोज्दै छ उसले ? नगरकोट आउने पर्यटकहरुबाट असुलेको रकमवाट नगरकोटको विकासको लागि के कस्तो योजना ल्याएको छ त ? उसले । किन यसरी रकम असुल्दै छ भनेर विदेशीले सोधेको प्रश्नको जवाफ अंग्रेजीमा दिन नसक्ने भाडाका टट्टुहरुलाई मैदानमा उतारेर के तमासा देखाउदै छ तेलकोट भन्ञ्ज्याङमा ? तेलकोट भन्ञ्ज्याङ तिमीहरुको विर्ता हो ? र किन देखाउदैछ तमासा ? यो कहिले सम्मको लागि हो ? दिनमा एक लाख भन्दा वढी रकम असुलेर के गर्ने योजना वनाएको हो मेयरले ? किन तेलकोटवाट विदेशी पर्यटकहरु फर्कन वाध्य तुल्याएका छन् मेयरले ? यसले कस्लाई र कति घाटा हुन्छ भन्ने चीज के हाम्रो मेयरले हिसाव गरेको छ ? हचुवाको भरमा संसारमाझ किन नगरकोटको वदनाम गर्न अगाडि वढ्यो मेयर ?
याद राख, नगरकोटको वलात्कारीहरु, तिमीहरुको योजना अव अन्त्य हुदैछ । ठुलो धनराशी आर्जन गर्नको लागि राजनितिक खोल ओढेर नगरकोटलाई नांगो पार्ने काम तिमीहरुवाट भईरहदा हामी नगरकोटवासीले सहनशिलता प्रदान गरेको मात्र हो, यसको मतलव झुकेको होईन, कमजोर भएको होईन र केही गर्न नसक्ने पक्कै पनि होईन । हामीले चाहेको खण्डमा तिम्रा त्यस्ता योजना र ताकतहरु सहजै जमिनमा दबाउने छन् र फितलो प्रमाणित गरिदिने छन् नगरकोट वासीले र सेकेन्ड भरमा भदाभुङ हुनेछ छ ।
अब दिन गन्दै वसे हुन्छ है……..
धरान प्रशासनका नासु सहित तिनजना कर्मचारी घुस लिदालिदै पक्राउ